रातारात फुट्यो ओली गुट, यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित ! - jagritikhabar.com
रातारात फुट्यो ओली गुट, यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित !
नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन चितवनमा शुक्रबार हुँदैछ । नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको १० महाधिवेशनमा नेताहरुले आ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्षमा केपी ओली नै दोहोरिने संभावना छ।